De Bruyne oo hal arin ugu baaqay Saaxiibadiisa Manchester City si ay ugu guuleystaan Premier League – Gool FM
(Premier League) 21 Jan 2019. Laacibka khadka dhexe kooxda Manchester City Kevin De Bruyne ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu dib ugu soo laabto garoomada isla markaana uu si joogto ah ugu ciyaaro kooxdiisa Sky Blues, kadib markii uu ka soo kabsaday dhaawacii uu qabay.
Laacibka reer Belgiam ayaa dhinaca kale ka hadlay loolanka adag xili ciyaareedkan ee horyaalka Premier League,wuxuuna saaxiibadiisa kooxda ugu baaqay inay diirada saaraan oo kaliya kulamada ay ciyaarayaan iyaga oo aysan ku mashquulin kuwa Liverpool.
“Waxaa jirta laba kooxood – Liverpool iyo Manchester City – si ay ugu dagaalamaan ku guuleysiga horyaalka Premier League, sidoo kale waxaa jirta Tottenham oo heysata dhibco badan, xaalada marna ma fududa”.
“Waxaan sameyneynaa kaliya isku day, waxaan dooneynaa inaan badino dhammaan kulamada soo haray, waxba kama sameyn karno kulamada ay ciyaareyso kooxda Liverpool, sidaas darteed waa inaanan ku mashquulin iyaga”.
Si kastaba Manchester City ayaa fadhida kaalinta 2-aad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League, waxayna 4 dhibcood ka hooseeyaan hogaamiyaasha Liverpool, oo xili ciyaareedkan ka hoos sameenaya qaab ciyaareed aad u wanaagsan macalinka reer Germany ee Jurgen Klopp.
Marcos Rashford oo far dheeraaday Halyeeyadii hore ee Man United sida Wayne Rooney, Cristiano Rolado iyo.....
SHEEKADA OO GABO GABO SOO GAARTAY: Morata oo ka tagaya Chelsea iyo Higuain oo soo Cago dhiganaya....(Ka Bogo Wararkii ugu dambeeyay)